Wararka Archives -
Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Duleedka Degmada Ceelbaraf ee Hirshabelle
July 2, 2020 F.G 0
Wararka laga Helayo Duleedka Degmada Ceelbaraf ee G/sh/Dhexe ayaa Sheegaya in uu Qarax Xoogan Ka Dhacay Duleedka Magaalada Ceelbaraf. Qaraxa ayaa la Sheegayaa in lala Eegtay Kolonyo Ka Tirsan Ciidanka Dowlada Federalka Oo Wadda Marayay Balse lama Soo Sheegin Cid Wax ku naqatay. Inkastoo laga Maqlay Qaraxa Xoogiisa Deegaanada Ku Dhaw Dhaw Ceelbaraf. Sida ay Sheegeen Qaraxan ayaa ahaa Miino Dhulka lagu Aasay Waxaana la Sheegayaa in ay Dhigeen Alshabaab . dhanka kale ma jiro wax war ah Oo Ka Soo Baxay Saraakiisha Cidanka Somaliya.
Wararka ayaa Sheegaya Ugu yaraan 8 qof ay ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Addis Ababa, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta dalkaas. Booliska ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qalalaasaha ka dhacay Itoobiya ay haatan gaartay 80 kaddib dilkii loo geystay fanaanka ka caanka ah dalkaas Hachalu Hundesa. Sidoo Kale Waxaana lagu soo warramayaa in dibadbaxyaal careysan ay isugu soo baxeen waddooyinka kuwaas oo codsanaya in xabsiga laga soo daayo Jawar Maxamed. Waxaana laga cabsi qabaa in dibadbaxyadu ay rabshado kale ka dhashaan.Maxaa yeelay Shacabka ayaa ah kuwa aad uga Careeysan Dilka loo geeystay Fanaanka. Si kastaba Ha ahaatee Tan iyo Markii uu geeriyooday R/Wasaarihii Itoobiya Meles Zenawi Waxaa Itoobiya ka dhacay Dibed baxyo Waa weeyn Oo ay shacabka dhigayeen kuwaasoo doonayay isbedel Waxaana lagu Soo magacaabay Dowlad uu Hogaamiyo R/Wasaare Abiy Balse Sidaa kuma joogsan rabshadihii Waxaana aad moodaa in ay ku Dhex jiraan gacmo sedexaad Oo iska horkeenaya Shacabka iyo Dowlada Itoobiya.
Nin Yemeni Ah Oo Hargeysa Lagu La’yahay Muddo Dhawr Maalmood Ah
Nin Dhalashadiisu tahay waddanka Yemen oo muddoba deganaa Magaalada Hargeysa ayaa muddo dhawr habeen ah la la’yahay meel uu jaan iyo Cirib dhigay kadib markii Gaari ay wateen niman aan la aqoonsani kaga kaxaysteen Meherad Ganacsi oo uu ku lahaa Magaalada Hargeysa. Sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah asaxaabtiisu, Ninkan Yemeniga ah oo lagu magacaabo Maxamed Cali Cabducasiis Muxsin oo ka mid ahaa Yemanida ku soo qaxay Somaliland ayaa dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey la la’yahay iyada oo ay wararku sheegayaan in laga kaxaystay Meheraddiisa lana ogayn cidda kaxaysatay iyo meel lala tagay toona, walina eheladiisa iyo asaxaabtiisu baadi doon uga jiraan iyaga oo ku war geliyay ciidamada Ammaanka Somaliland. Maxamed Cali Cabdulcasiis Muxsin oo meherad Ganacsi ku haystay Xaafadda 150-ka, Degmada 26-ka Juun ee Caasimadda Hargeysa waxa goor ku dhawaad Salaaddii Maqrib ah albaabka meheradiisa soo joogsaday Gaari yar oo Tagsi ah, kaasi oo nimankii watay ay saareen sidaana kula tageen walina aan la garanayn waxa ay raggaasi ahaayeen iyo waxa ay ka rabaan ninkan toona. “Waxa ay ahayd goor Maqrib ah. Ninkani [Sii aqri]
Booliiska Somaliland oo xabsiga dhigay dhalinyaro kusoo labistay Calanka Somalia
Wararka laga Helayo magaalada Gebilay ayaa sheegaya in ciidamada booliiska Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen dhalinyaro kusoo la bisatay calanka Soomaaliya. Dhalinyaradaan ayaa la sheegay in ay funaanado ka sameysan calanka Soomaaliya ay ku dhex wateen magaalada taas oo sababtay in ciidamada Booliiska Soomaaliland ay qabtaan isla markaana ay xabsiga u taxaabaan. Xarigga dhalinyaradaan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli guud ahaanba dalka looga dabaaldegayay markii gobolada Waqooyi iyo Koonfur ay ka xuroobeen gumaystihii Ingiriiska iyo Taliyaaniga ahaeydna israacii labada gobol. Si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay oo Soomaaliland ay xabsiga u taxaabaan dhalinyaro lagu eedeyay in ay kusoo labisteen calanka Soomaaliya taas oo dembi looga arko deegaanada maamulkaas.
Faarax C/qaadir “DFS iyo Maamul Goboleedyada inay wada hadlaan waa Qasab”
Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir oo soo noqday Wasiirkii hore ee Cadaaladda iyo Dastuurka ee Xukuumaddii hore ayaa sheegay in dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada inay wada hadlaan ay tahay arrin aas aasi u ah xasilloonida dalka iyo jiritaanka Qaranimada. Faarax C/qaadir oo ka qeyb galayay Dood ka baxeysay Telefishinka Somali Cabel ayaa sheegay in waxyaabaha la isku haayo ay ka mid tahay doorashada, isla markaana dowladda Federaalka, dowlad goboleedyada iyo dhinacyada kale ee siyaasadda talada ku leh ay tahay inay ka wada hadlaan. “Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay wada hadlaan waa arrin aas aasi u ah xasiloonida dalka iyo jiritaanka qaranimadeena waxyaabaha la isku heysto doorashada waa mid ka mid ah, doodda waxay tahay, haddii wixii la rabay la qaban waayo, waqtigii la rabay lagu qaban waayo waxaynu u baahanahay in aynu tashano”ayuu yiri Faarax C/qaadir. Sidoo kale Waxaa uu sheegay in dadka talada wax ku leh oo la’aantoo waxba socon karin ay ku jiraan maamul goboleedyada, ayna ka mid yihiin hoggaanka dalka ee dhisan sida Dastuurka ku qoran. “Macno weyn ma yeelaneyso dalka inaa dhahno [Sii aqri]
Dowlada Shiinaha oo si kulul uga soo horjeestay xiriirka Taiwan iyo Somaliland
Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa si kulul uga soo horjeestay xiriirka ay sameysteen Somaliland iyo Taiwan oo labadaba ah maamulo horay ugu dhawaaqay gooni u goosad, balse aan loo aqoonsan dal. War kasoo baxay Safaarada Shiinaha ee Muqdisho ayaa lagu shaaciyay in marnaba aysan ogolaan dooninin xiiir gaar ah lala yeesho Taiwan oo ay sheegeen inay Shiinaha ka mid tahay. “Uma oggolaanayno in qof, urur ama xisbi siyaasadeed midkoodna uu ka gooyo dhul Shiinaha, waqti kasta ama qaab kasta. Taiwan waa qayb ka mid ah Shiinaha oo aan laga goyn karin ayaa lagu yiri” warka kasoo baxay Safaarada Shiinaha ee Muqdisho. Taiwan oo ka mid ah qeyb ka mid ah dalka Shiinaha ayaa raadienysa inay ka go’do dalkaas, ayaa dhowaan shaacisay inay xiriir diblomaasi la sameysaneyso Somaliland. Wasiirka Arrimaha Dibadda Taiwan ayaa sheegay inay abuurayaan xafiis wakiilo kala matalaya iyaga iyo Somaliland oo ay ka kala furan doonaan caasimadaha labada dhinac. Taiwan ayaa heshiis la saxiixatay Somaliland, inkastoo aan si rasmi ah loo soo bandhigin heshiiskaas. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo maalmo ka hor ka [Sii aqri]
July 1, 2020 F.G 0
Guddiga Madaxbanaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa maanta Shahaadooyinka KMG ah ee diwaangalinta siiyay 8 xisbi oo ku biiraya xisbiyadii Guddiga uu horey u diwaangaliyay. Munaasabadda xisbiyada lagu sinayay shahaadada oo ay ka qeybgashay guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran Xaliimo Ismaaciil ayaa lagu qabtay qaab online ah iyadoo uu Guddiga aaladda ZOOM- ka u adeegsiday qabsoomidda Munaasabadaas. Xisbiyada la diiwaangeliyay maanta ee la siiyay shahaadooyinka ayaa waxaa ay kala ahaayeen;- – Xisbiga Bulshada Dimoqaardiga Soomaaliyeed. – Xisbiga Nolosha iyo Cadaaladda. – Xisbiga Walaalaha Midoobay. – Xisbiga Tubta Horumarka iyo Nabadda. – Xisbiga Isbahaysiga Mustaqbalka. – Xisbiga Soomalinimo. – Xisbiga Cadaaladda Horumarinta Dimoqaraadiyadda iyo Isqadarinta iyo Xisbiga Badbaado Qaran.
Madaxweene Farmaajo Oo Ka Jawaabay Hadal Kasoo Yeeray C/Raxmaan C/Shakuur
Munaasabad lagu xusayey 60-guurada ka soo wareegtay Xornimada Gobolada Koonfureed iyo Midnimada dalka ee 1-da Luulyo ayaa Maanta lagu qabtay Xarunta Murtida iyo Wacyigelinta Qaranka ee Tiyaatarka Munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynaha, Guddoonka Baarlamaanka, Wasiiro, Xildhibaano, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Fanaaniin iyo Mas’uuliyiin kale oo aad u badan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa Munaasabadda ka jeediyay Khubad dheer oo uu uga hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda dalka iyo Xornimada Gobolada Koonfureed iyo Midnimada dalka ee 1-da Luulyo. Madaxweynaha oo mar ka hadlaayay Arrimaha Doorashada ka dhici doonta dalka ayaa waxaa uu sheegay in Doorashadaas ay noqoneyso mid qof iyo Cod, isagoo ku celiyay in la qabanayo Doorasho qof iyo Cod, isla markaana awood ay u leeyihiin shacabka. Waxaa uu sheegay Madaxweyne Farmaajo in Madaxda haatan ee dowladiisa ay tilmaamsanayaan S.Y.L oo aysan jirin meel kale oo ay wax ka baranayaan, wuxuuna sheegay inay doonayaan inay dalka ay wax badan ka qabtaan. Sidoo kale hadalkaas Madaxweynaha ayaa u muuqday mid ugu Jawaabayay hadalkii xalay kasoo yeeray C/raxmaan C/shakuur ee ahaa inuu dowladda Farmaajo [Sii aqri]
Khasaaro Ka Dhashay Dagaalkii Ka Dhacay Dhuusamareeb ee u dhaxeeyay Ciidamada Dowlada
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal Ciidamo ka wada tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya Maanta ku dhexmaray Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug. Dagaalkaas oo muddo ku dhow saacad socday ayaa waxaa uu sigaar ah u dhexmaray Ciidanka Nabadsugida iyo kuwa Booliska dowladda ee Haramcad oo xiligii Doorashadii Galmudug la geeyay halkaas. Dagaalka ayaa ka bilaawday muran ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay adeegsiga Bar Koontarool oo Ciidamada Booliska Haramcad ay maamulaan, halkaas oo dhowr jeer lagu celiyay xili ay doonayeen inay maraan saraakiil iyo Ciidamo ka tirsan kuwa NISA. Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay maqlayeen inta dhawaqa rasaasta xoogan oo labada dhinac Isdhaafsanayeen, wallow haatan uu dagaalka istaagay, kadib dadaalo la sameeyay. IInta la ogyahay ku dhawaad 5 ruux oo isugu jiray labada dhinac iyo dad shacab ah ayaa rasaasta ku dhaawacmay, isla markaana waxaa la geeyay Xarun Caafimaad oo ku taalla halkaas. Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka dowladda Federaalka ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb oo ay uga hadlayaan dagaalkii ka dhacay Magaalada una dhexeeyay [Sii aqri]
Dowlada Somaliya Oo Digniin U Dirtay Maraakiib Kalluumeysi Sharci Darro Ka Wada Xeebaha
Kolonyo maraakiib kalluumaysi ah oo laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa waxaa lagu arkay iyagoo ka howlgalaya biyaha Soomaaliya oo si sharcidarra ah halkaas uga kalluumaysanaya, sida uu sheegay Wasiirka Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda ee Soomaaliya Cabdullaahi Bidhaan Warsame. Wasiirka oo la hadlayay BBCda ayaa sheegay in bartamihii Bishii Maarso ay digniin u direen dowladda Iiraan hasayeeshee aanay aanay wax tallaaba ah qaadin. “Maadaama Iiraaniyiinta naga dhaxayn xiriir diblumaasiyadeed, dhibbay nagu noqotay inaan markiiba gaarno laakiin dacwaddaas waannu gudbinnay wayna haystaan, markii ay waxba ka qaban waayeenna adduunweynaha iyo ciddii kale ee aan rabnay inay garab naga siiyaan tuuganimadaas cad oo bareerka ah baan u gudbinnay,” ayuu yiri wasiir Bidhaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay la timid qalab casri ah oo ka caawin kara la socodka dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee xeebaha dalka. Kalluumaysiga sharcidarra ah ayaa ah mid si weyn ugu baahsan biyaha Soomaaliya walow ay badda ku sugan yihiin ciidamo caalami ah oo ka kala socda dalal kala gadisan Bishii Maarso, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay uga digtay dalalka Iiraan iyo Pakistan kalluumaysiga sharcidarrada ah ee [Sii aqri]